Arbetsförmedlingen oo shaqaalaynaya ajaanibta si ay u qabtaan shaqadii hagayaasha | Somaliska
Ka dib markii bishii hore ay Arbetsförmedlingen joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay shirkadaha Hagayaasha dadka cusub ee loo yaqaan (Etableringslots) ayay hada ku dhawaaqeen in shaqadii ay qaban jireen shirkadahaas ay qaban doonaan shaqaale qaas ah oo AF ay qori doonto. Shaqaalahaan ayaa noqonaya kuwo ka shaqeeya xafiisyada AF iyagoo dadka cusub ka caawin doona sidii ay wadanka ula qabsan lahaayeen.
Agaasimaha Arbetsförmedlingen oo lagu magacaabo Mikael Sjöberg ayaa sheegay in sababta ay sidaan u samaynayaan ay tahay in ay xaqiijayaan in aysan dhicin dhibaatooyinkii la soo daristay Hagayaasha qaaska ah oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq iyo dambiilenimo. Mikael Sjöberg ayaa sheegay in ay qorayaan shaqaale aqoon luuqadeed leh isla markaana fahansan nolosha wadanka Sweden.
Dhinaca kale, Baaritaan ay samaysay Medieakademin ayaa lagu soo bandhigay in Arbetsförmedlingen ay yihiin hay’ada dowliga ah ee loogu necebyahay wadanka, iyadoo ay aad u hooseyso kalsoonida ay dadku ku qabaan shaqadooda. Waxaa sidoo kale kalsooni aad u hooseysa shacabka Sweden ka helay Laanta Socdaalka (Migrationsverket).
Asc Laanta socdaalka ayadaa u maahan in labaaro sida ay ila tagay